जिन्दगीभरको मिहिनेतले गणतन्त्रको घर बनाइयो, त्यसमै आगो लगाइदियो : डा. भट्टराई - Naya Aawaj
जिन्दगीभरको मिहिनेतले गणतन्त्रको घर बनाइयो, त्यसमै आगो लगाइदियो : डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराइले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घरमा आगो लागेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् यस्तो बताएका हुन्।
प्रचण्ड–माधव समूहको विरोधसभा ‘टी’ आकारमा, ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त
भोली प्रचण्ड-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, जथाभाबी नारा लगाउन नपाइने